Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay magaalada Laascaanood - Caasimada Online
Home Somaliland Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay magaalada Laascaanood
Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay magaalada Laascaanood
Laascaanood (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in xalay jabhadda hubeysan ee SSC ee uu hoggaamiyo Col. Feysal Falaalug ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi oo dhaca waqooyiga dalka.
Weerarka oo dhaxay xilli saq dhexe ah ayaa waxaa xigay iska hor imaad toos ah oo dhex-maray jabhadda iyo sidoo kale ciidamada Somaliland ee ka howl-gala halkaasi.
Dagaalka ayaa markii dambe istaagay, waxaana dib u noqday dableydii jabhaddaee weerarka culus ku qaadday halkaasi.
Xaaladda ayaa saaka deggan, waxaana hadda qeybo ka mid ah magaalada howlgallo ka wada ciidamada Somaliland oo baadi goobaya raggii weerarka kusoo qaaday.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka Sool laga dareemayey dhaq-dhaqaaqyo uu ka wado Col. Feysal Falaalug oo si weyn uga soo horjeedo xukuumadda Somaliland, iyada oo xiisadda labada dhinac ay soo taagneyd muddo aad u dheer.
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool ayaa sheegaya in ay xalay halkaas ay weerar ku qaadday jabhadda Xoraynta SSC oo uu hoggaamiyo Col. Faysal FalaalugDhawaqa rasaas xooggan oo dhexmartay Laamaha Amniga Somaliland iyo dabley ka tirsan jabhaddaas ayaa gelinkii dambe ee xalay laga maqlay xaafadaha kala duwan ee Laascaano